Samachar Batika || News from Nepal » ब’न्चरो प्र’हार गरी बाबुआमाको ह’त्या
ब’न्चरो प्र’हार गरी बाबुआमाको ह’त्या
तेह्रथुम, वैशाख २६ गते । यहाँको फेदाप गाउँपालिका–५ इसिबुका एक युवाले बाबुआमाको ह’त्या गरेका छन् । इसिबुका २० वर्षीय कञ्चन लिम्बूले बिहीबार साँझ ६ बजे बाबुआमाको ह त्या गरेका हुन् । सामान्य घरायसी वि वादमा ४२ वर्षीय बुबा रुपबहादुर लिम्बू र ३५ वर्षीया सौतेनी आमा इशा खापुङ लिम्बूलाई ब न्चरो प्र हार गरी ह त्या गरेका हुन् ।
कञ्चनले आफूले बाबुआमाको ह त्या गरेको भनि १०० नं फोन गरेपछि प्रहरी घ टनास्थल पुगेको थियो । घ टनास्थल प्रहरी चौकीदेखि चार किलोमिटर दुरीमा पर्छ ।
मृ’तकको शव परीक्षण गर्न अस्पताल लगिने प्रहरीले जनाएको छ । मृ’तकका सात महिनाकी छोरी छिन् ।
कञ्चनले १०० नंमा फोनसँगै प्रहरीले उसको पिछा गरिरहेको र भाग्दै गरेका अवस्थामा पोक्लाबाङ प्रहरी चौकीको टोलीले नि’न्त्रणयमा लिएको प्रहरी निरीक्षक तेजबहादुर दाहालले जानकारी दिनुभयो । घट’नास्थलमा सम्दु प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक कमल तोलाङको टोलीले सु”रक्षा दिइरहेको प्रहरी निरीक्षक दाहालले बताउनुभयो ।
घ’टनाको थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली आज त्यसतर्फ जाने र मृ’तकको शव परीक्षण गर्न अस्पताल लगिने प्रहरीले जनाएको छ । मृ’तकका सात महिनाकी छोरी छिन् । नाबालक छोरी मृ’तकका दाजु देवबहादुर फोम्वोसँग रहेका वडाध्यक्ष टेकबहादुर घिसिङले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०४:४०
अरुको सेवामा खटेकी अनिशालाई लग्यो कोरोनाले, भर्खर जन्मेकी छोरी बनिन टुहुरी
किन चर्चामा छ कंगनाको ‘१० हजार डलर’ को पर्स (१० तस्विर सहित)
सुन्दरी नायिका रानी मुखर्जीको पछिल्लो १५ तस्विरहरु हेर्नुहोस(फोटो फिचर)
टेलिभिजनका सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने सेलिब्रेटी
हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ सहित उनको परिवारका पाँच सदस्यमा देखियो कोरोना
विवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? यी ८ परीक्षण अनिवार्य गर्नुहोस नत्र जिन्दगि नै बर्बाद होला !
एकता कपुरलाई चोरीको आ’रोप
युवतीको जिब्रोको मूल्य १६ करोड, यस्तो छ उनको जिब्रो
यी ४ सेलिब्रेटी प्रियंका, ऋचा, गरिमा र रक्षा आमा बन्दै, सार्वजनिक गरे तस्वीर
हिनाले ह’ट तस्बिर सेयर गरेपछि, फ्यानले दिए यस्तो ध’म्की(१५ तस्विर सहीत)
पाँचतारे होटलमा अर्डर गरे केरा, बिल देखेपछि यी नायकको उड्यो होस्